Aabe Soomaaliyeed oo xanuunsan 25 Sano oo dalbanaya in la caawiyo – SBC
Aabe Soomaaliyeed oo xanuunsan 25 Sano oo dalbanaya in la caawiyo
Posted by Webmaster on February 18, 2013 Comments
Nuur Jaamac Cabdi Waa aabe Soomaaliyeed oo mudo 25 sano la il darnaa xanuun kansar ah kaaso ka haleelay lugta ayaa waxaa uu walaalihiisa muslimiinta ee dalka iyo dibadiisa ku nool ka Dalbanayaa in ay caawiyaan.
Aabe Nuur Jaamac oo ah 70 jir ayaa lugta laga jaray 2 jeer sida aad sawirka ku arkaysaan kaasoo markii sadaxaad loo sheegay in laga jarayo waxayna halis ugu jirtaa in uu kansarku uu ku faafo jirka intiisa kale .
Hadaba mar aan ku booqnay goobta uu ka dagan yahay magaalada Boosaaso ayaa aabahaasi uu ahaa mid aad ula il daran xanuunkaas isagoo taahiisuna uu ahaa mid aan kala joogsi lahayn waxaana marar badan ay dhaqaatiirtu u sheegeen in xaaladiisa aan dalka waxba looga qaban karin.
Aabahaas ma haysto wax dhaqaalo ah oo uu isku dabiibo waxaana uu codsanayaa in la caawiyo iyadoo loo eegayo dhibaatada haysata sanadahaas badan.
Hadaba Cidii Caawinaysa aabahaas ha kala xiriiraan Telefoonka Sahalka ah 00252 90789501 Ama telefonka Caadiga ah ee 00252 90745817.